Tadidinay iny tamin’ny 10 taona lasa iny ka ! Sitraponao anie no milingilingy haka an’io toerana io e ! Aza mampihomehy e ! Tsy mahamenatra anie ny miteny hoe tsy poinsa ilay izy fa mba mangataka ny fanomezan-tananareo nifaninana koa e ! Isika samy isika ihany ireto ry Jean a ! Aza matahotra, hoy aho. Tsy tohizako ny teniko fa sao ianao dia hangididy loha be eo indray. Izay fa korazy e !